Protoloc (ပရိုတိုလော့ခ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Protoloc (ပရိုတိုလော့ခ်)
Protoloc (ပရိုတိုလော့ခ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Protoloc (ပရိုတိုလော့ခ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Protoloc (ပရိုတိုလော့ခ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Omeprazole သည် proton-pump inhibitors ဟု ခေါ်သော ဆေးအမျိုးအစား ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အစာအိမ်ထဲတွင် အက်စစ် ထုတ်လုပ်မှုပမာဏကို နည်းပါး စေသည်။
Omeprazole ကို အစာရေမြိုပြွန်တွင် အရည်များ ပြန်စီး သည့်ရောဂါ ကို ကုသရန် အသုံးပြုသည်။ တစ်မျိုးတည်း သို့မဟုတ် အခြားဆေးများနှင့် တွဲ၍ အသုံးပြုသည်။ အစာ ရေမြိုပြွန်ကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေပြီး အစာရေမြိုပြွန် အား နောက်ထပ် ထိခိုက်မှု ဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။
Protoloc (ပရိုတိုလော့ခ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဤဆေးကို အောက်ပါအတိုင်း သောက်ပါ။
ဆေးကို ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်း ပါးစပ်မှ သောက်ပါ။ ဆေး၏ ဘူးတွင်ပါသော ညွှန်ကြားချက် အားလုံးကို လိုက်နာပါ။
အချက်အလက် အချို့ကို နားမလည်ပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Protoloc (ပရိုတိုလော့ခ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Protoloc® ကို အခန်းအပူချိန်တွင် တိုက်ရိုက်အလင်း နှင့် စိုထိုင်းမှုတို့မှ ကင်းဝေးအောင် သိမ်းဆည်းရမည်။ ဆေးပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် Protoloc® ကို ရေချိုးခန်း သို့မဟုတ် ရေခဲ သေတ္တာတွင် မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။
Protoloc® တွင် မတူညီသော ကုန်တံဆိပ်များစွာရှိသည်။ တံဆိပ်ပေါ် မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းမှုပုံစံ ကွဲပြားနိုင်သည်။ သိမ်းဆည်းမှုနှင့် ပတ်သက်သော ညွှန်ကြားချက်များအတွက် ဆေး၏ ဘူးကို အမြဲစစ်ရန် အရေး ကြီးသည်။ သို့မဟုတ် ဆေးရောင်းသူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။ ဆေးများအားလုံးကို ကလေးနှင့် အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်များမှ ဝေးရာနေရာတွင် ထားပါ။
ညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိဘဲ Protoloc® ကို အိမ်သာထဲ ထည့်ခြင်း၊ ရေဆင်းပိုက်ထဲ ထည့်ခြင်း မပြုပါနှင့်။ သက်တမ်းကုန်သွားပါက သို့မဟုတ် မလိုအပ်တော့ပါက ထိုထုတ်ကုန်ကို သင့်တော်စွာ စွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီးသည်။ ထုတ်ကုန်ကို ဘေးကင်းစွာ စွန့်ပစ်နိုင်ရန် ဆေးဝါး ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Protoloc (ပရိုတိုလော့ခ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Omeprazole ကို ညွှန်ကြားမှု မရှိဘဲ သောက်ရန် အစီအစဉ် ရှိပါက
omeprazole, dexlansoprazole (Dexilant), esomeprazole (Nexium), lansoprazole (Prevacid), pantoprazole (Protonix), rabeprazole (Aciphex), အခြားဆေးများ သို့မဟုတ် omeprazole တွင်ပါသော ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ် မတည့်ပါက
ရင်ပူခြင်းသည် ၃လနှင့် အထက် ကြာပါက
သင့်တွင် အောက်ပါ လက္ခဏာများ ခံစားနေရပါက
ငန်းဖမ်းခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်း၊ ရင်ပူခြင်းနှင့် အတူ မူးဝေခြင်း
အသက်ရှူ မြန်ခြင်း၊ အသက်ရှူ ခက်ခဲခြင်း
ရှင်းမပြနိုင်အောင် ကိုယ်အလေးချိန် ကျခြင်း
အော့အန်ခြင်း၊ အထူးသဖြင့် အန်ဖက်များတွင် သွေး ပါပါက
အစာမြိုချရာတွင် ခက်ခဲခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း
ဝမ်းအရောင်မည်းခြင်း၊ ဝမ်းတွင် သွေးပါခြင်း
သွေးတွင်း မက်ဂနီစီယမ် ပမာဏ နည်းပါက သို့မဟုတ် အသည်းရောဂါ ရှိပါက
သင်သည် အသက် ၅၀ နှင့် အထက် ရှိပါက
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Protoloc (ပရိုတိုလော့ခ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
အမျိုးသမီးများ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သို့မဟုတ် နို့တိုက်စဉ်တွင် Protoloc® သုံးလျှင်ရနိုင်သော အန္တရာယ်များကို ပြည့်စုံစွာ လေ့လာထားခြင်း မရှိပါ။ Protoloc® မသောက်မီ ဖြစ်နိုင်သော အကျိုး ကျေးဇူးနှင့် အန္တရာယ်များကို ချိန်ညှိရန် ဆရာဝန်နှင့် အမြဲတိုင်ပင်ပါ။
Protoloc (ပရိုတိုလော့ခ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Omeprazole သည် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်စေနိုင် သည်။ အောက်ပါ လက္ခဏာများ ဆိုးရွားလာပါက သို့မဟုတ် ပျောက်ကင်းမသွားပါက ဆရာဝန်အား ပြောပါ။
အချို့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည် ပြင်းထန်နိုင်သည်။ အောက်ပါ လက္ခဏာများ ခံစားရပါက ဆရာဝန်အား ချက်ချင်း ခေါ်ပါ။ သို့မဟုတ် အရေးပေါ် ကျန်းမာရေး အကူအညီ ရယူပါ။
မျက်နှာ၊ လည်ချောင်း၊ လျှာ၊ နှုတ်ခမ်း၊ မျက်လုံး၊ လက်၊ ခြေဖဝါး၊ ခြေကျင်းဝတ် သို့မဟုတ် ခြေထောက် ရောင်ရမ်းခြင်း
အသက်ရှူ ခက်ခြင်း၊ မြိုချရန် ခက်ခဲခြင်း
နှလုံးခုန်သံ မမှန်ခြင်း၊ မြန်ခြင်း၊ တဒိန်းဒိန်းမြည်ခြင်း
ခန္ဓါကိုယ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း တုန်ခြင်း
ဝမ်းလျှောခြင်း။ အရေ ကျဲသော ဝမ်းများ
Omeprazole ကို အချိန်အကြာကြီး သောက်နေရသူများ သည် အစာအိမ်နံရံ ပါးခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ လူတိုင်းတွင် ထိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ မဖြစ်နိုင်ပါ။ အထက်တွင် ဖော်ပြမထားသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ လည်း ရှိနိုင်သည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို စိုးရိမ်ပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Protoloc (ပရိုတိုလော့ခ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Protoloc® သည် လက်ရှိသောက်နေသော အခြားဆေးများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။
Rilpivirine (Edurant, in Complera, Odefsey)
အချို့ ပဋိဇီဝဆေးများ, ဥပမာ- ampicillin (Principen, in Unasyn)
သွေးကျဲဆေး။ ဥပမာ- warfarin (Coumadin)
Digoxin (Lanoxicaps, Lanoxin) disulfiram (Antabuse)
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Protoloc (ပရိုတိုလော့ခ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Protoloc® သည် အစာ သို့မဟုတ် အရက် နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏ အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေ သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။ ဆေးမသောက်မီ အစာ သို့မဟုတ် အရက်နှင့် ဓါတ်ပြုခြင်း ဖြစ်နိုင်သလားကို ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Protoloc (ပရိုတိုလော့ခ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Protoloc® သည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေ အနေများနှင့် အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထိုသက်ရောက်မှုသည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံ ပြောင်းသွားခြင်း ကိုဖြစ်စေနိုင် သည်။ သင့်တွင် လက်ရှိ ရှိနေသော ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အားလုံးကို ဆရာဝန်နှင့် ဆေးဝါးပညာရှင်အား အသိပေးထား ရန် အရေးကြီးသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Protoloc (ပရိုတိုလော့ခ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ထောက်ခံထားသော ပမာဏမှာ အစားမစားမီ သောက် ဆေး ၂၀ မီလီဂရမ် တစ်နေ့ တစ်ကြိမ်ဖြစ်သည်။ လူနာ အများစုသည် ၄ပတ်မှ ၈ပတ်အတွင်း ပျောက်ကင်းသည်။
Helicobacter pylori ကူးစက်ခြင်း
နှစ်မျိုး ကုသမှု။ ထောက်ခံထားသော ပမာဏသည် မနက်ပိုင်း တွင် Omeprazole ၄၀ မီလီဂရမ် သောက်ဆေး တစ်နေ့ တစ်ကြိမ် နှင့် Clarithromycin ၅၀၀ မီလီဂရမ် သောက်ဆေး တစ်နေ့ သုံးကြိမ်ဖြစ်သည်။ ၁-၁၄ ရက်ထိသောက်ပါ။ ၁၅ ရက် မြောက်နေ့တွင် omeprazole ၂၀ မီလီဂရမ် သောက်ဆေး တစ်နေ့ တစ်ကြိမ် မနက်ပိုင်း ကို ၁၅ရက်နေ့မှ ၂၈ အထိ သောက်ပါ။
သုံးမျိုး ကုသမှု။ ထောက်ခံထားသော ပမာဏမှာ omeprazole ၂၀ မီလီဂရမ် နှင့် clarithromycin ၅၀၀ မီလီဂရမ်နှင့် amoxicillin ၁၀၀၀ မီလီဂရမ် သောက်ဆေးတို့ကို တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ်ဖြင့် ၁၀ ရက်သောက်ပါ။ ပြည်တည်နာသည် ကုထုံး၏ အစကတည်းက ရှိပါက omeprazole ၂၀ မီလီဂရမ် သောက် ဆေး တစ်နေ့တစ်ကြိမ်ဖြင့် နောက်ထပ် ၁၈ ရက် ထပ်သောက် ပါ။
ထောက်ခံထားသော ပမာဏမှာ အစားမစားမီ ၄၀ မီလီဂရမ် သောက်ဆေး တစ်နေ့ တစ်ကြိမ်ကို ၄ပတ်မှ ၈ ပတ်အထိ ဖြစ်သည်။
ထောက်ခံထားသော ပမာဏမှာ အစားမစားမီ ၂၀ မီလီဂရမ် သောက်ဆေး တစ်နေ့တစ်ကြိမ်ဖြစ်သည်။ ဆေး ပမာဏကို လိုလားသော တုံ့ပြန်မှုနှင့် လူနာ၏ ခံနိုင်ရည်ပေါ်မူတည်ပြီး တစ်နေ့ ၄၀ မီလီ ဂရမ် အထိ မြှင့်တင်နိုင်သည်။
အစပိုင်းတွင် သက်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ ၆၀ မီလီဂရမ် သောက်ဆေး တစ်နေ့ တစ်ကြိမ်ဖြစ်သည်။ ဆေးအချိုးအစား သည် လူနာ၏ လိုအပ်မှုပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲပြားသည်။ ထိန်း သိမ်းမှုအတွက် ဆေးကို ၁၂၀ မီလီဂရမ်ဖြင့် တစ်နေ့ ၃ကြိမ် ပေးနိုင်သည်။ တစ်နေ့တွင် ၈၀ မီလီဂရမ်ထက်များပါက ဆေး ပမာဏကို ခွဲခြားပေးနိုင်သည်။
အစပိုင်းတွင် ထောက်ခံထားသော ပမာဏမှာ အစာမစားမီ ၂၀ မီလီဂရမ် သောက်ဆေး တစ်နေ့တစ်ကြိမ်ကို ၄ပတ်မှ ၈ ပတ် အထိသောက်ရန် ဖြစ်သည်။ လိုအပ်ပါက ထိုပမာဏကို တစ်နေ့ ၄၀ မီလီဂရမ် အထိမြှင့်တင်နိုင်သည်။
ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် တစ်နေ့လျှင် ၁၀ မှ ၂၀ မီလီဂရမ် ပမာဏ ကို အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ရောဂါများ ထိန်းသိမ်းမှု အတွက် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုပမာဏသည် ဘေးကင်းပါသည်။
အစပိုင်းတွင် ထောက်ခံထားသော ပမာဏမှာ အစာမစားမီ ၆၀ မီလီဂရမ် သောက်ဆေး တစ်နေ့ တစ်ကြိမ် ဖြစ်သည်။ ဤ အချိုးအစားကို လိုအပ်သော တုံ့ပြန်မှုနှင့် လူနာ၏ ခံနိုင်ရည် အပေါ် မူတည်ပြီး ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ထိန်သိမ်းမှုအတွက် ဆေး ပမာဏကို ၁၂၀ မီလီဂရမ် တစ်နေ့ သုံးကြိမ်အထိ ပေးနိုင် သည်။ တစ်နေ့ ပမာဏသည် ၈၀ မီလီဂရမ်ထက် ပိုပါက ခွဲ၍ ပေးနိုင်သည်။
အစပိုင်းတွင် ထောက်ခံထားသော ပမာဏမှာ အစာမစားမီ ၆၀ မီလီဂရမ် သောက်ဆေး တစ်နေ့ တစ်ကြိမ်ဖြစ်သည်။ ဤ အချိုးအစားကို လိုအပ်သော တုံ့ပြန်မှုနှင့် လူနာ၏ ခံနိုင်ရည် အပေါ် မူတည်ပြီး ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ထိန်သိမ်းမှုအတွက် ဆေး ပမာဏကို ၁၂၀ မီလီဂရမ် တစ်နေ့ သုံးကြိမ်အထိ ပေးနိုင် သည်။ တစ်နေ့ ပမာဏသည် ၈၀ မီလီဂရမ်ထက် ပိုပါက ခွဲ၍ ပေးနိုင်သည်။
မကြာခဏ ရင်ပူခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ထောက်ခံထားသော ပမာဏမှာ အစာမစားမီ ၂၀ မီလီဂရမ် သောက်ဆေး တစ်နေ့ တစ်ကြိမ်ကို ၁၄ ရက်အထိ ဖြစ်သည်။
ကလေးတွေအတွက် Protoloc (ပရိုတိုလော့ခ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ထောက်ခံထားသော ပမာဏမှာ 0.7 mg/kg/dose တစ်နေ့ တစ်ကြိမ်ဖြစ်သည်။
GERD, ပြည်တည်နာ, အစာရေမြိုပြွန် ရောင်ခြင်း
အသက် ၁နှစ်မှ ၁၆ နှစ်ထိ ကလေးများ
ထောက်ခံထားသော ပမာဏမှာ ၅ မီလီဂရမ် တစ်နေ့ တစ်ကြိမ်ဖြစ်သည်။ ( ၅ ကီလိုဂရမ်မှ ၁၀ ကီလိုဂရမ် အောက်)
ထောက်ခံထားသော ပမာဏမှာ ၁၀ မီလီဂရမ် တစ်နေ့ တစ်ကြိမ်ဖြစ်သည်။ ( ၁၀ ကီလိုဂရမ်မှ ၂၀ ကီလိုဂရမ် သို့မဟုတ် ၂၀ ကီလိုဂရမ်အောက်)
ထောက်ခံထားသော ပမာဏမှာ ၂၀ မီလီဂရမ် တစ်နေ့ တစ်ကြိမ်ဖြစ်သည်။ ( ၂၀ ကီလိုဂရမ် အထက်)
Protoloc (ပရိုတိုလော့ခ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Protoloc® ကို အောက်ပါ ပုံစံ၊ ပြင်းအား များဖြင့် ရနိုင်ပါ သည်။
Protoloc ၂၀ မီလီဂရမ်
ဆေးလွန်ခြင်း၏ လက္ခဏာများမှာ အောက်ပါတို့ ဖြစ်သည်။
နှလုံးခုန်သံ မြန်ခြင်း သို့မဟုတ် တဒိန်းဒိန်းမြည်ခြင်း
Protoloc® သောက်ရန် မေ့သွားပါက တတ်နိုင် သလောက် မြန်မြန်ပြန် သောက်ပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် သောက်ရန် အချိန်ရောက်သွားပါက မေ့သွားသော အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်သောက်ပါ။ နှစ်ကြိမ် ထပ်မသောက်ပါနှင့်။
Protoloc® (omeprazole). https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a693050.html#other-information. Accessed November 13, 2016
Protoloc® (omeprazole). https://www.drugs.com/omeprazole.html. Accessed November 13, 2016